China Ceramics သုံးသော White Colour Wollastonite ဓာတ်သတ္တု 100-325Mesh Powder ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |Fitech
ကြွေထည်တွေမှာ White Color Wollastonite mineral 100-325Mesh Powder သုံးတယ်။
Wollastonite သည် အချင်းများ သို့မဟုတ် အမျှင်များစုပုံထားသော သေးငယ်သော ပလပ်တီပုံဆောင်ခဲများ၏ Triclinal စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အရောင်သည် အဖြူဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ မီးခိုးရောင်၊ နီညိုရောင်ရှိသည်။အရည်ကြည်တောက်ခြင်း၊ ကွဲအက်နေသော မျက်နှာသည် ပုလဲတောက်ပြောင်မှုကို ပြသသည်။မာကျောမှု 4.5 ~ 5.5၊ သိပ်သည်းဆ 2.75 ~ 3.10g/cm3။စုစည်းထားသော ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်တွင် လုံးဝပျော်ဝင်နိုင်သည်။ယေဘူယျအားဖြင့် အက်ဆစ်၊ အယ်လကာလီနှင့် ဓာတုဓာတ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။Hygroscopicity သည် 4% ထက်နည်းသည်။ဆီစုပ်ယူမှုနည်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်စီးကူးမှုနည်းခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော လျှပ်ကာများ။Wollastonite သည် အက်ဆစ်ကျောက်နှင့် ထုံးကျောက်ကြားတွင် အဓိကအားဖြင့် အသွင်ပြောင်းသတ္တုတွင်းထွက်ဖြစ်ပြီး၊ Fulminite နှင့် garnet တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။၎င်းကို နက်နဲသော အသွင်ပြောင်း calc ပုံဆောင်ခဲ schist မီးတောင်ထွက်ပေါက် နှင့် အချို့သော အယ်ကာလိုင်း ကျောက်ဆောင်များတွင်လည်း တွေ့ရှိရသည်။Wollastonite သည် အဆိပ်အတောက်မရှိသော၊ ဓာတုဓာတ်ချေးခံနိုင်ရည်၊ ကောင်းသောအပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှု၊ ဖန်နှင့်ပုလဲတောက်တောက်၊ ရေစုပ်ယူမှုနှုန်းနည်းပါးပြီး ဆီစုပ်ယူမှုတန်ဖိုး၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသော ဝူလာစတိုနိုက်ကဲ့သို့သော သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ နှင့် အချို့သော အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။Wollastonite ထုတ်ကုန်များ၊ ရှည်လျားပြီး ခွဲရလွယ်ကူသော ဖိုင်ဘာ၊ သံဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းသော၊ မြင့်မားသော အဖြူရောင်။
CAS နံပါတ် ၁၃၄၄-၉၅-၂
အရွယ်အစား 100-325 mesh
ထုပ်ပိုးခြင်း။ 25/1000/1200/1250kg အိတ်
1. အထူးစီမံဆောင်ရွက်သည့်နည်းပညာသည် ၎င်း၏ထူးခြားသော အက်ဆစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး၊ ထပ်ထည့်ထားသော ဆီလီကွန်အမှုန့်ကို အဖြူရောင်ဘုတ်စက္ကူ၏ မီးခိုးရောင်ဖြစ်အောင်၊ အဖြူရောင်နှင့် အလင်းပိတ်နိုင်မှု (မျက်နှာပြင်အဖုံးဒီဂရီ)၊ ချောမွေ့မှု၊ ချောမွေ့မှု၊ လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ အလျားလိုက်နှင့် ကတ်ထူပြားများ၏ အရေအတွက်နည်းသော ကွာခြားချက်နည်းပါစေ။ စိုစွတ်သောပုံပျက်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းလိုက်လျောညီထွေရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အခြားပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှုကို များစွာလျှော့ချနိုင်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် စက္ကူထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
2. Wollastonite ဘရိတ်အုပ်များ၊ ကြွေထည်အအေးခံခြင်း စသည်တို့ကို မော်တော်ယာဥ်၊ သတ္တုဗေဒ၊ ကြွေထည်များ၊ ပလတ်စတစ်များနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးများသည်။၎င်းတို့အနက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် wollastonite သုံးစွဲမှု အလားအလာ အကောင်းဆုံးနယ်ပယ်မှာ အင်ဂျင်နီယာ ပလတ်စတစ် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ပလပ်စတစ်နှင့် ရော်ဘာလုပ်ငန်းအတွက် အဖြည့်ခံနှင့် အားဖြည့်ပစ္စည်းအနေဖြင့် wollastonite သည် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်များတွင် အစားထိုးအဖြစ် ပိုမိုအသုံးပြုလာပြီး wollastonite စျေးကွက်လိုအပ်ချက်သည် လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။
ထုတ်ကုန်များကို FDA၊ REACH၊ ROSH၊ ISO နှင့် အခြားသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များဖြင့် အမျိုးသားအဆင့် စံနှုန်းများနှင့်အညီ အတည်ပြုထားသည်။
ထုပ်ပိုးခြင်း- ပက်လက်မပါသော 25/1000kg အိတ်/1200/1250kg အိတ်
တင်နေသည်- 1×20'FCL နှုန်းဖြင့် 20MT
1 × 20'FCL တွင် pallet မပါဘဲ 24-25MT
ယခင်- 99.99% min Beta Bismuth Trioxide
နောက်တစ်ခု: စက်ရုံမှ 98-99.9% min Vanadium Pentoxide Orange Powder ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
Acicular Wollastonite Powder ရော်ဘာအတွက် တရုတ်ရောင်းချသူ ကြွေထည် Wollastonite
တရုတ် Wollastonite Powder
72% မိနစ် Cobalt Tetroxide Co3O4
အရည်အသွေးကောင်း 99% min Vanadium Pentoxide Powder
99.5% အနည်းဆုံး အဝါနုရောင် Calcined ဇင့်အောက်ဆိုဒ်
99% မိနစ် Stannic Oxide (တင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်)
စက်ရုံမှ နီကယ်အောက်ဆိုဒ် Ni2O3 ထောက်ပံ့သည်။